« LA PLUME STILEEX 2018 » : Hitondra an’izao tontolo izao hitsidika an’Antananarivo
Ho an’ity andiany voalohany ity, hitondra an’izao tontolo izao hitsidika an’Antananarivo ny fifaninanana La Plume stileex 2018.
Asa soratra amin’ny teny frantsay tsy tokony hihotra ny teny 5000 avy no ampifaninanana, ka ny hakanton’ny renivohitr’i Madagasikara no lohahevitra hovoaboa- sana amin’izany. Na hiresaka momba ny tsena, izay mampalaza an’ Antananarivo tokoa, na ireo toerana maro samihafa toy ny toeram-pisakafoana, ny fialam-boly mahazatra ireo mponina dia azo atao avokoa rehefa maneho io lohahevitra io.
Ahafahan’ny daholobe mandray anjara : na lehibe na kely, na monina eto Madagasika na vahiny, izy io ary tsy mifidy na ireo efa manana traikefa na izay vao nanoratra. Ny asa soratra rahateo no tiana homen-danja eto. Ahafahana mampahafantatra an’ Antananarivo manerana izao tontolo izao koa ity fifaninanana ity satria ao aorian’ ny fandraisana ireo asa soratra izay azo alefa amin’ ny tranonkala ny 1 oktobra ka hatramin’ny 22 oktobra 2018 ho avy izao sy ny fisafidianana ireo lahatsoratra 10 mendrika indrindra ny 05 novambra hatramin’ny 19 novambra izao. Mandritra ny 19 novambra hatramin’ny 2 desambra kosa dia azon’ ny rehetra atao ny mamaky azy ireo sy mifidy izay lahatsoratra tokony hibata ny amboara sy ireo loka be holalaovina amin’io.
Ny 7 desambra no hanambaràna ny valin’ny lalao sy ireo nandrombaka ny fandresena mandritra ny lanonana karakarain’i Stileex. Hangarahara tanteraka ny lalao satria ny vadintany Me Alain Rakotonirina no hitsara azy. Entina manome lanja an’i Madagasikara, anehoana fa iray ihany ny Malagasy sy hahitana an’ity renivohitra ity amin’ny fomba maro samihafa no antom- pisiana lehibe an’ity fifaninanana ity. Vao andiany voalohany moa ity indray mitoraka ity fa manantena sahady ny hisian’ny manaraka ary manentana antsika rehetra mba handray anjara fa maro ny loka hozaraina.